Istres—​Amacebiso Anokukunceda Kuso
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiNgesi IsiNorway IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
“Kwakungathi ndingqisha endawen’ enye. Ndandisebenza iiyure eziyi-16 ngosuku ndingafane ndiphumle nangeempela-veki. Oku kwakundihlupha kuba ndandisimka ndize ndibuye intombazana yam ilele. Istres sasindigulisa.”—UKari, eFinland.
LE NGXAKI kaKari iqhelekile. Umbutho onceda abantu abagula ngengqondo eUnited Kingdom uthi, eBritani umqeshwa omnye kwabahlanu uguliswa sistres, yaye omnye kwabane ude alile emsebenzini ngenxa yestres. Iipilisi zokwehlisa istres zithengwe gqitha ngonyaka uqoqosho belulubi ngawo.
Ixhala lemali okanye ezinye iingxaki
Ukungavani kwakho nomntu othile
Intlungu exhelayo obukhe wakuyo
Sikwenza ntoni istres?
Sikwenza ube nomoya ophantsi
Sikwenza ungakwazi ukulala
Sikumoshela ubuhlobo nabantu
Xa unestres umzimba wakho usebenza ngendlela emangalisayo. Istres sikwenza uphefumlele phezulu, nentliziyo ibethe ngamandla. Iiseli zegazi neglucose esemzimbeni ziyaphindaphindeka. Oku kubangela ukuba umzimba wakho ukwazi ukulwa nestres. Sakuba siphelile, umzimba ubuyela kwimeko yesiqhelo. Kodwa ukuba asipheli, sinokukugulisa, usoloko unxubile okanye uneqwakaza. Ngoko ukufunda indlela yokulwa nestres kubalulekile emzimbeni nasengqondweni yakho.
Istres asisoloko siyingozi. Oogqirha bengqondo baseMerika bathi: “Istres emntwini sifana nesixhobo somculo ivayolin: ukuba idlalelwa phantsi kakhulu loo mculo unokozelisa; kodwa xa idlalwa ngamandla umculo unokukruqula, neentambo zide ziqhawuke. Ngokufanayo istres siyafuneka emzimbeni, kodwa xa siqatsele sisenokukubulala. Ngoko eyona nto ibalulekileyo yindlela yokumelana naso.”
Enye into esimele siyazi ngestres kukuba asibafumani ngendlela efanayo abantu. Ngoko into ekustresayo wena isenokungamstresi omnye umntu. Sukuba siqatsele istres xa into oqhele ukuyenza ikubangela ungakhululeki.
Abanye abantu baye basebenzise utywala, iziyobisi okanye icuba ukuze “balwe” nestres. Bambi batya kakhulu okanye bahlale nje phambi kweTV okanye kwekhompyutha—zinto ezo ezibangela ukuba istres siqatsele kunokuba siphele. Ngoko yintoni enokusinceda sikwazi ukumelana nestres?
Abantu abaninzi bancedwe yiBhayibhile. Ngaba ubulumko bayo bunokukunceda? Ukuze siphendule lo mbuzo, makhe sijonge ezi zinto zine zidla ngokubangela istres.
Sonke asiqinisekanga ngobomi. Nayo iBhayibhile ithi, ‘sonke sehlelwa lixesha nasisihlo esingenakubonwa kwangaphambili.’ (INtshumayeli 9:11) Ungalehlisa njani ixhala? Khawuzame la macebiso.
Thetha nomntu omthembayo kowenu okanye umhlobo ngento ekuxhalabisayo. Uphando luthi, xa uye wathetha nomntu omthandayo ngento ekwenza ixhala awude ugule sistres. Yinyani into yokuba, “iqabane lokwenyaniso lithanda ngamaxesha onke, yaye lingumzalwana ozalelwe ixesha lokubandezeleka.”—IMizekeliso 17:17.
Sukusoloko ucinga ngezinto ezimbi, kuba ezo ngcinga zinokukubangela ixhala. Ibe loo nto uyixhaleleyo isenokungenzeki! Yiloo nto iBhayibhile isithi: “Musani ukuxhalela ingomso, kuba ingomso liya kuba namaxhala alo.”—Mateyu 6:34.
Umthandazo uya kukunika amandla. Eyoku-1 kaPetros 5:7 ithi: “Liphoseni [kuThixo] lonke ixhala lenu, kuba unikhathalele.” UThixo ubonisa ukuba usikhathalele ngokusinika uxolo lwengqondo nangokusiqinisekisa ukuba ‘akayi kuze abashiye’ abo bacela kuye uncedo ngomthandazo.—Hebhere 13:5; Filipi 4:6, 7.
Ukuya nokubuya emsebenzini, ukufunda, ukuhoya abantwana nabazali abolupheleyo, zonke ezi zinto zinokwenza istres. Kodwa kwezi zinto ayikho engabalulekanga. (1 Timoti 5:8) Ngoko ke, yintoni enokukunceda ukuze zingakustresi?
Ziphe ixesha lokuphumla. IBhayibhile ithi: “Kulunge ngakumbi ukuzalisa isandla ngokuphumla kunokuzalisa izandla zozibini ngomsebenzi onzima ngokusukelana nomoya.”—INtshumayeli 4:6.
Qala ngokwenza izinto ezibalulekileyo, yaye ungazixakekisi ngezinto ezingeyomfuneko. (Filipi 1:10) Zama ukunciphisa iindleko zakho kunye nexesha olichitha emsebenzini.—Luka 21:34, 35.
UKari ebesikhe sathetha ngaye ngaphambili waye wacingisisa ngendlela aphila ngayo. Uthi: “Ndaye ndaqonda ukuba bendiphilela isiqu sam.” Ngoko, walithengisa ishishini lakhe waza wafumana umsebenzi owawuzakumenza abe nexesha lentsapho. Uthi “Imali asisenayo njengakuqala, kodwa mna nomfazi wam istres asisenaso kuba ngoku sichitha ixesha kunye njengentsapho nabahlobo. Ukuba kunye nentsapho kubaluleke ukodlula ishishini.”
3 UKUNGAVANI KWAKHO NOMNTU OTHILE
Ukungavani nomntu othile ingakumbi emsebenzini kubangela istres. Ukuba unaloo ngxaki, la macebiso alandelayo anokukunceda.
Ukuba umntu uyakucaphukisa, zola. Sukucima umlilo ngepetroli. IMizekeliso 15:1 ithi: “Impendulo, xa inobulali, isusa umsindo, kodwa ilizwi elibangela intlungu linyusa umsindo.”
Le ngxaki ninayo zama ukuba niyithethe ngembeko ninodwa, xa usenza njalo uyakuba uyamhlonela loo mntu.—Mateyu 5:23-25.
Zam’ ukuqonda lento inixabanisayo. Ukuyiqonda kuza kukwenza ‘ungakhawulezi ukucaphuka’ ngoba kaloku uzibeke endaweni yakhe. (IMizekeliso 19:11) Kwakhona, oko kuya kukunceda uyibone le ngxaki lomntu anayo ngawe.
Zama ukuxolela. Ukuxolela akuyonto entle kuphela, kodwa kuyanceda nasempilweni. Uhlolisiso olwenziwayo ngo-2001 lubonisa ukuba, “ukungaxoleli” kunyuse izinga lesifo sentliziyo, nehighblood. Kodwa ukuxolela kona kubangele ukuba istres singabikho.—Kolose 3:13.
4 INTLUNGU EXHELAYO OBUKHE WAKUYO
UNieng ohlala eKhambodiya wehlelwa zizinto ezibuhlungu ngokulandelelanayo. Ngo-1974 wonzakaliswa yibhombu eyaqhushumba kwisikhululo senqwelo-moya. Kunyaka olandelayo, kwafa abantwana bakhe ababini, umama kunye nomyeni wakhe. Ngo-2000, umzi wakhe watsha nqunqe ngumlilo kwaza kwasweleka nomyeni wakhe wesibini kwiminyaka emithathu eyalandelayo. Ngeloo xesha, waye wafuna ukuzibulala.
“Kulunge ngakumbi ukuzalisa isandla ngokuphumla kunokuzalisa izandla zozibini ngomsebenzi onzima”
Sekunjalo, kukho into eyamncedayo uNieng. NjengoKari uNieng wancedwa yiBhayibhile nasekuchitheni ixesha efundisa abanye ngayo. Ibali lakhe lisikhumbuza uhlolisiso olwenziwa eBritani ngo-2008. Olu hlolisiso lwalusithi, “enye indlela yokunyamezela xa unestres, kukunceda . . . abanye abantu”—nto leyo eyathethwa kudala yiBhayibhile.—IZenzo 20:35.
Kwakhona uNieng wafumana ithemba ngekamva elingazukuba nazo iingxaki neentlungu ezikhoyo ngoku. Ikamva eliza kuba “nobuninzi boxolo” emhlabeni wonke.—INdumiso 72:7, 8.
Ithemba elinje nobulumko bokumelana neengxaki zobomi azinakuthelekiswa nanto, ibe zifumaneka eBhayibhileni. Izigidi zabantu sezincediwe yile ncwadi emangalisayo. Nawe inokukunceda.
“Eyona Ndlela Yokuphelisa Istres”
Umbutho iNational Institutes of Health (NIH) waseUnited States, uthi: “Ukwenza utshintsho ebomini bakho yeyona ndlela yokuphelisa istres. Qala ngokutya ukutya okunesondlo, ujime uze ulale ngokwaneleyo. Zitye kancinci izinto ezinecaffeine notywala, uze ungasisebenzisi isiyobisi inicotine, icocaine nezinye.” Lo mbutho ucebisa nokuba siziphe ixesha lokuphumla emsebenzini, sichithe ixesha nentsapho nabahlobo okanye sifunde ukudlala isixhobo esithile somculo.